တယ်လီဖုန်း SIM card များကိုငွေကျပ်ထောင်ဂဏန်းဖြင့်သာရောင်းချမည်ဟုဆို – Myanmar Mobile App Edition: Myanmar | ပြည်တွင်းပြည်ပမုိုဘိုင်းသတင်းများ
Samsung galaxy S3 သမားများအတွက် 4.2.2 official jellybean leaked firmware ထွက်ရှိလာပါပြီ.. Fire & Forget Final Assault For Pc Game 110MB Galaxy S4 HD Multi Launcher Theme v2.2 APK 38MB JAS 5s (မြန်မာဖုန်း) ထွက်ရှိ V Root လို့ခေါ်တဲ့ Onclick Root Tool လေးပါခင်ဗျာ Home
Published On: Tue, Mar 12th, 2013 ပြည်တွင်းပြည်ပမုိုဘုိုင်းဖုန်းဆုိုင်ရာသတင်းများ | By သက်နိုင်စိုး တယ်လီဖုန်း SIM card များကိုငွေကျပ်ထောင်ဂဏန်းဖြင့်သာရောင်းချမည်ဟုဆို
တယ်လီဖုန်းဆင်းကတ်များအား ဧပြီ ၁ရက်မှစ၍ ကျပ်ငွေနှစ်သောင်းဖြင့် ရောင်းချမည်ဟုမိမိပြောကြားခဲ့သည်ဟု သတင်းဂျာ နယ်အချို့တွင်ဖော်ပြနေခြင်းများမှာ မဟုတ်မှန်ကြောင်း ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးစိုးသိမ်းကပြောသည်။
ရန်ကုန်မီဒီယာက ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနှင့်ဆက်သွယ်မေးမြန်းရာတွင် ဦးစိုးသိမ်းက အထက်ပါအတိုင်းငြင်းဆိုလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
`ကျွန်တော်အဲသလိုလုံးဝပြောကြားခြင်းမရှိပါဘူး။ဧပြီ ၁ရက်မှာ စတင် ရောင်းချပေးမှာမှန်ပါတယ်။ဒါပေမယ့် ကျပ်နှစ်သောင်းနဲ့ရောင်း မယ်လို့ ကျွန်တော်မပြောခဲ့ပါဘူး။ဘယ်လောက်နဲ့ရောင်းမယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်သိပေမယ့် ပြောခွင့်မရှိပါဘူး။သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကသာ တရားဝင်ကြေညာထုတ်ပြန်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်`ဟု ဦးစိုးသိမ်းကပြောသည်။
`တကယ်ရောင်းတဲ့အခါ အခုပြောနေကြတဲ့ ကျပ်နှစ်သောင်းဆိုတာထက် အများကြီးလျော့နည်းတဲ့ဈေးနဲ့ရောင်းမှာပါ။ထောင်ဂဏန်းမျှသာဖြစ်ပါ လိမ့်မယ်။အဲသလောက်ပဲ ကျွန်တော်ပြောပြပါရစေ`ဟု ပြည်ထောင်စု ၀န်ကြီးက ဆက်လက်ပြောဆိုသည်။
Mobile ဖုန်းသုံးစွဲမှုမြင့်တက်လာခြင်းကြောင့် ကွန်ပျူတာဈေးကွက်အရောင်းအ၀ယ်ကျဆင်းနေ
CDMA 800 Mhz SIM Card များနှစ်လအတွင်းချပေးပြီးလျှင် GSM,WCDMA နှင့် CDMA SIM Card များတစ်ပြိုင်နက်ချပေးမည်။
CDMA 800 Mhz မိုဘိုင်းစနစ် ကွန်ယက်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုအကြောင်းသိကောင်းစရာ
73 comments on “တယ်လီဖုန်း SIM card များကိုငွေကျပ်ထောင်ဂဏန်းဖြင့်သာရောင်းချမည်ဟုဆို”	Aung on March 12, 2013 at 10:53 am said:
Reply ↓	king on March 12, 2013 at 11:06 am said:
APRIL FOOL လုပ်မလား ၀န်ကြီးရယ်
Reply ↓	Thit Oo Maw on March 14, 2013 at 10:38 am said:
ဖုန်းတွေကို ခါးပတ်ပတ်လည် ခါးပတ် လုပ်ပြီး သုံးဦးမယ်…
Reply ↓	မင်းခေါင် on March 12, 2013 at 11:21 am said:
စီးပွားရေး လက်မနှေးရင် သိပ်ဖြစ်နိုင်တာပေါ့ ငယ်ကသင်ခဲ့ရတဲ့ ဘောဂဗေဒ ပညာရပ်တွေက်ိုမမေ့သေးရင် ဖြေစရာမလိုတဲ့အဖြေပါ နောက်ဆို Free ဖြစ်နိုင်ချေရှိပါတယ် – အများနားလည်အောင်တွက်ကိန်းနဲ့ပြရရင် – ယခုလက်ရှိသုံးနေသူပေါင်း x နာရီ မိနစ် = ———-ဝင်ငွေ ကျပ်သန်းပေါင်း ။ ( ကျပ်ထောင်ဂဏန်း(သို့)Free ကြောင့် )သုံးစွဲသူ သန်းခြောက်ဆယ် x နာရီ မိနစ် = ——————————————————–ဝင်ငွေကျပ်သန်းပေါင်း အဆပေါင်းများစွာ ကွာခြားချက် — ဒါဆိုနောက်ပိုင်း Free ဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင် သိပ်စဉ်းစားစရာမလို
Reply ↓	shwepinthar on March 12, 2013 at 11:23 am said:
april fool လုပ်တာ မဖြစ်ပါစေနဲ့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရယ်…
Reply ↓	johnko on March 12, 2013 at 12:01 pm said:
twar san par*******dar myo tawe yoe nay pyi kwar********pon pyin tawe athit pyan shar chae kwar******** tawe khat tat kate sa tine***** dar myo tawe gyi kwar*****
Reply ↓	JQ on March 12, 2013 at 12:57 pm said:
Reply ↓	winmyatthu on March 12, 2013 at 1:14 pm said:
Reply ↓	koko on March 12, 2013 at 1:54 pm said:
ma yone par bu kwar
Reply ↓	bwevayama on March 12, 2013 at 1:54 pm said:
Sim card ကို အလကားတောင်ပေးသင့်ပါတယ်။ ဖုန်းခေါ်ဆိုခကိုလည်း လျှော့ချပေးသင့်ပါတယ်။ အရှေ့တောင်အာရှမှာ(မြန်မာမပါသေး) တစ်မိနစ် ဖုန်းခေါ်ဆိုခမှာ ပျမ်းမျှအားဖြင့် မြန်မာကျပ်ငွေ ၈-ကျပ်သာရှိပါတယ်။
Reply ↓	Dennis on March 12, 2013 at 2:27 pm said:
ပြောတော့ ပြောပါ မလုပ်ပေးမှာ သောချာပါတယ် ,
Reply ↓	khin zaw oo on March 12, 2013 at 2:31 pm said:
ဖုန်းကဒ်သတင်းတွေကအမျိုးကြားနေရတယ် ပွင့်လင်းမြင် သာမှုမရှိတော့ပြည်သူတွေမှာယုံရနိုးနဲ့စောင့်ရတာကြာလှပြီ တရားဝင်ကြေငြာတော့ဘာဖြစ်မှာလဲရိုနီတွေကိုကြောက်နေရတုန်း ဘဲ့လား
Reply ↓	ye lwin on March 12, 2013 at 2:37 pm said:
တစ်ကယ်ပြောတာလား နောက်ရဘူးနော် မျှော်လင့်ချက်တွေထပ်မပေးနေအုန်းမှာလား M P T ရယ်
Reply ↓	Hein San on March 12, 2013 at 2:40 pm said:
Reply ↓	thet on March 12, 2013 at 2:49 pm said:
မဖြစ် နိုင် ဒီ ဘဝ တွေ ဝေး ကွာ လွန်း နေ ဈေး ပေါပေါ နဲ့ sim card မရနိုင်
ဒီတခါ လည်း ဘာတွေ ကြံနေလည်း မသိဘူး ဘယ်သူမှ မယုံကြ ပါနဲ့
ဟို တခါ လည်းဒီအတိုင်းပဲ လိမ် မှန်းသိသိ ရက်နဲ့ ခံ နေ ရတာ mpt က အစာ
မဝသေးဘူးဟရသလောက်စား အုံး မှာ phone call internet call ရှိသမျှ အကုန်လုံး
ချီးတောင် စားလို့ ရ ရင် စားအုံးမှာ
Reply ↓	ပြောချင်ဘူး on March 12, 2013 at 2:54 pm said:
Reply ↓	သိနေတယ် on March 12, 2013 at 3:20 pm said:
ဂယ်လားဟင် ညာရဘူးနော် ဘုရားရိုက်တတ်တယ် မုသာဝါဒဆိုတာဘုရားကြိုက်ဘူး။
Reply ↓	thaemaung.mg@gmail.com on March 12, 2013 at 3:21 pm said:
Reply ↓	aung on March 12, 2013 at 3:32 pm said:
သောက်ရူးတွေ ပြောစကားနာမယောင်မနေနဲ့ မသုံးရလို့သေမသွားဟ….နာလည်လားဝန်ကြီး ပုံကြီးချဲ့ပြီးပြောမနေနဲ့ ခင်ဗျားတို့ကခွေးလည်းဖြစ်ချင်သေးတယ် အမြှီးလည်းမနှံ့တတ်ဘူးဗျာ…ခင်ဗျားတို့sim card တွေခင်ဗျားတို့ ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးတွေသေမှထွက်ဖြစ်မယ်ထင်တယ်ကျွန်တော်က…..
Reply ↓	achit.thit2012@gmail.com on March 12, 2013 at 5:48 pm said:
Reply ↓	achit.thit2012@gmail.com on March 12, 2013 at 5:50 pm said:
Reply ↓	မောင်တာလော on March 13, 2013 at 12:03 am said:
ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကစည်းရုံးရေးလေ။ ပြီးတော့ဝင်ငွေရှာတာပေါ့။
Reply ↓	zaw win latt on March 13, 2013 at 1:26 am said:
Reply ↓	Ko Naing on March 13, 2013 at 2:02 am said:
Reply ↓	KyawZaww on March 13, 2013 at 2:56 am said:
Reply ↓	moesaw on March 13, 2013 at 3:46 am said:
Reply ↓	myo aung on March 13, 2013 at 4:27 am said:
ကြိုဝယ်ထားတာ။ ပျက်လို့ ပြင်ရတာ (၂)ခါတောင်ရှိနေပီ။ဟီး!!!!!
Reply ↓	saung ko aung on March 13, 2013 at 6:39 am said:
ကြိုက်လိုက် share လိုက်ပြီနော် အကိုတို့ရေ
Reply ↓	shineorchid@gmail.com on March 13, 2013 at 6:40 am said:
Reply ↓	saung ko aung on March 13, 2013 at 6:40 am said:
ကြိုက်လို့ share သွားပြီအကိုရေ
Reply ↓	phyo on March 13, 2013 at 7:09 am said:
Reply ↓	ချစ်ချစ်mpt on March 13, 2013 at 7:58 am said:
မင်းလုပ်သမျစွဲလန်းရတယ် mpt ရယ် ———————————————-
အရမ်းချစ်တယ် Mpt ရယ်
Reply ↓	မနော်ဟယ်ရီ on March 13, 2013 at 8:26 am said:
ဟဟ ဒီလိုဆိုတော့်လဲ ခါးမှာ ဘယ်ညာ စပ်စလူးထ အောင်ဝယ်ကိုင်လိုက်မှာပေါ့ ဟဟဟဟ
Reply ↓	ye min naing on March 13, 2013 at 9:25 am said:
Reply ↓	ုkyaw on March 13, 2013 at 1:47 pm said:
Reply ↓	အာကာမောင် on March 13, 2013 at 1:52 pm said:
Reply ↓	myomyo on March 13, 2013 at 5:40 pm said:
Reply ↓	bar bu on March 13, 2013 at 6:41 pm said:
Reply ↓	kanmyint on March 13, 2013 at 11:05 pm said:
I want toask the same question when will connection improve at my home town myitkyina？I wish we don’t need to waitforalong period.
Reply ↓	anonymous on March 14, 2013 at 1:32 am said:
၂သောင်းနဲ့ တောင် မရောင်းနိုင်ပါဘူးဆိုမှ…
၂သောင်းအထက်ပါ…ဦးရဲထွဋ် ပြောတာ မင်းမဖတ်ရဘူးလား…
Reply ↓	YeMinWin on March 14, 2013 at 3:58 am said:
Reply ↓	DeanColeone on March 14, 2013 at 4:35 am said:
They all are lying
Reply ↓	Handsomegentleman70@gmail.com on March 14, 2013 at 8:35 am said:
SIM CARD အလကားပေးတောင်မှ (၁)မိနစ် (၅၀)ကျပ် နဲ. သာမန် လူ (၁)ယောက် (၁)နေ.ကို မိနစ်(၂၀) ပြောနိုင်လား၊ (၁)လ ကို (၃)သောင်း ၊ လူတွေ စဉ်းစားကြ၊
Reply ↓	Aung Myint Oo on March 14, 2013 at 10:44 am said:
Reply ↓	tunnlayy on March 14, 2013 at 12:01 pm said:
ဘာလဲကွာ ဘာတွေလဲ mpt ရူးနေတာလားဟ ဖုန်းခေါ်ဆိုခ ချပေးမှကိုင်ကျမှာပေါ့ကွ ရှေ့ရေးကို စဉ်းစားစမ်းပါကွာ sim ဈေးဘယ်လိုချချ ခေါ်ဆိုခချမှရမယ်လေကွာ တစ်နပ်စားဥာဏ် မသုံးနဲ့နော် လူတွေကအရူးမဟုတ်ဘူးကွ
Reply ↓	ကိုမင်း on March 14, 2013 at 2:00 pm said:
Reply ↓	ကိုစိုး on March 14, 2013 at 2:23 pm said:
မထင်ပေါင်…April Fool လို့ပဲထင်တယ်နော်…
Reply ↓	tatkomr on March 15, 2013 at 8:28 am said:
အကို အင်တာနက်သု့းချင်လ်ုဖုန်းနဲ့ အင်တာက်ကိုကွန်ပျါ်တာမှာသုံးချင်လို့ပါ ပြောပြပါလား
Reply ↓	wai yan(Hteegyaint) on March 15, 2013 at 7:17 pm said:
hot newသတင်းမှာလည်းပါတယ် အပြောမဖြစ်ပါစေနဲ့ရခဲ့တော့လည်းဝမ်းသာရမှာပေါ့
Reply ↓	Thet phyo on March 16, 2013 at 6:27 am said:
သွားစမ်းပါ မာယာတွေ ရိုးနေပြီကွာ။ ဒါနောက်စရာမဟုတ်ဘူး။ အခု 200000 တောင် မကြားရလို့ ထောင်ဂဏန်းဆိုရင် လိပ်ခေါင်းထွက်အော်ရလိမ်မယ်
Reply ↓	ko jar on March 16, 2013 at 9:18 am said:
ဟုတ်ရင်တော့ ကောင်းတာပေါ့ ဗျာ
Reply ↓	စောက်ထင်မကြီး on March 16, 2013 at 4:07 pm said:
တစ်ကယ်လုပ်ပေးပေး မပေးပေး ဒီစောက် ကော်နက်ရှင်မကောင်းသ၍တော့ -ီး ဘဲ ထင်တယ်
Reply ↓	Wai Yan on March 17, 2013 at 3:06 am said:
ကျွန်တော့်မှာ လိပ်ခေါင် အထူးကုရှိတယ်။
ထောင်ဂဏန်း ဖုန်းကိုင်ချင်ရင် သူနဲ့အရင်ဆက်သွယ်ပါ။
April fool ၀န်ကြီးရယ် ပြုတ်ချင်တာလား၊ ရာထူးတိုးချင်တာလား
ထောင်ဂဏန်းဆိုတာ ဂျေး ကိုပြောတာ
Reply ↓	Vicky on March 17, 2013 at 9:32 am said:
တကယ်ရောင်းမှာလား////တကယ်ရောင်းမယ်ဆို ရင် နိုင်ငံမှာ တိုးတက်ကိန်း ရှိတယ်နော်,,,,thanks for selling
Reply ↓	Thaw Thaw on March 17, 2013 at 9:36 am said:
Reply ↓	Thaw Thaw on March 17, 2013 at 9:37 am said:
Reply ↓	chittone on March 18, 2013 at 10:26 am said:
ta cal phit yin kaung tar pot but thay char loat lar
Reply ↓	chittone on March 18, 2013 at 10:29 am said:
but hand phong ka zay tat mar.stop lain tar stop par totayuu yal.april fool ma loat nat
Reply ↓	koye on March 18, 2013 at 12:47 pm said:
Reply ↓	talkboy on March 18, 2013 at 1:06 pm said:
ပာုတ်လို့လာ ၀န်ကြီးရဲ့ ခင်ဗျာတို့အစိုရတွေ စားရင်စားရင် ဒို့မြန်မာပြည်ကြီးလဲ ရှိသမျှအမွှေးတွေပြောင်းကုန်းပါပြီး
ဖြစ်နိုင်ရင် ကောင်းတာပေါ့ ဆင်းရဲသားတွေ့လဲ ပျော်ရဒါပေါ့………….
Reply ↓	Nay Linn on March 19, 2013 at 7:47 am said:
ဘာဖုန်း..ညာဖုန်း..ဘယ်လောက်ပါ…ထောင်ဂဏန်းပါနဲ့ ….(တောက်…).မပြောလိုက်ချင်ဘူး…ကောင်းလိုက်တဲ့ ဖုန်းလိုင်းနဲ့ အင်တာနက်လိုင်း..လိပ်ရူကိုတောင်ကုန်းပေါ်တက်ခိုင်းသလိုပဲ…နှေးရတဲ့ ကြားထဲ..ရပ်လိုရပ်..နောက်ပြန်ဆုတ်လိုဆုတ်နဲ့ …
Reply ↓	dk.kunglay on March 19, 2013 at 10:56 am said:
ဟုတ်လို့ လာဟုတ်ရဲ့ လာာားးး ဝန်ကြီနည်နည်ပြောပါ
Reply ↓	စစ်နိုင် on March 19, 2013 at 12:08 pm said:
Reply ↓	konay on March 22, 2013 at 5:37 am said:
သတင်းအတိုင်း ထွက်မယ့်ရက်ကျမှ ကျနော်မပြောပါဘူးဆိုပြီး
Reply ↓	yar zu thit on March 24, 2013 at 8:03 am said:
Reply ↓	ma lay on March 25, 2013 at 7:12 am said:
Reply ↓	smiklady on March 25, 2013 at 3:34 pm said:
ဟုတ်လို့ဟား ကြည့်လဲ လုပ်ကြ နော် ပြောတော့တစ် မျိူးလုပ်တော့ တစ်မျိူး စောင့်နေ၇တာ မောတယ် ဟုတ်ပီလား ကဒ်တော့ ဈေးကျပါရဲ ဟမ်းစက် ကနည်းတာမဟုတ်ဘူးနော် မြို့တွေ ဘဲ ချပေးမနေနဲ့ သူတို့ က၀ယ်နိုင် တယ် ဟုတ်ပီလား နယ်တွေကိုအဒိ့ကထားပီး လုပ်ပေးနော် ၀န်ကြီးချူပ်….တောင်းဆိုတာပါ
Reply ↓	Net killer on March 26, 2013 at 12:22 am said:
လိုင်းမကောင်းရင်တော့အလကားပါဘဲ၊ တနိုင်ငံလုံး 3G တောင်မရသေးဘူး၊ လိုင်းကဒ်ကြည့်လွှတ်ချပေးနေရင် mobile သုံးစွဲသူတွေကိုလိုင်းကြပ်နေတဲ့ပြဿနာကိုခံစားနေရမှာအမှန်ပါဘဲ၊ဒါကြောင့် လိုင်းကောင်းအောင်နဲ့ အခြားသောဝန်ဆောင်မှုတွေကို နိုင်ငံတကာ အဆင့်မီအောင်အရင်ဆုံး ပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးသင့်ပါတယ်။အဲဒီလိုဖြစ်မဲ့နေ့ကိုမျှော်နေမိမှာပါ။
Reply ↓	Sai Sai on March 26, 2013 at 12:59 pm said:
Reply ↓	jipsy on March 26, 2013 at 7:18 pm said:
April 1 ရက်နေ့ မကျိန်းသေသေးကြောင်းပါ(ကောလဟာလလားမသိ)
April Fool Day ကတော့ ကျိန်းသေသလောက်ပါပဲ။
Reply ↓	kaungmyat on April 4, 2013 at 4:37 am said:
Reply ↓	aungmyint on April 4, 2013 at 12:32 pm said:
Reply ↓	SAN WIN AUNG on April 8, 2013 at 1:01 pm said:
၀န်ကြီးတွေကသူတို့အတွက်စားဖို့ဘယ်လောက်ကျန်မလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားနေလိုက်ကြတာ….အဲဒါမို့လို့ထောင်ဂဏန်းနဲ့ထွက်လာမဲ့ တန်ဖိုးနည်းSIM CARD တွေအကြောင်းအခုထက်ထိ တိတိကျကျသတင်းကိုမထုတ်ပြန်နိုင်ရှာကြဘူး
error13 on Samsung Galaxy Splus(I9001) ကို official 2.3.6 တင်ခြင်းzin mg mg on Samsung galaxy S3 သမားများအတွက် 4.2.2 official jellybean leaked firmware ထွက်ရှိလာပါပြီ..3n3my on Huawei U8950D ကို S4 custom rom တင်မယ် ..3n3my on Huawei U8950D ကို S4 custom rom တင်မယ် ..starlay on Samsung galaxy S3 သမားများအတွက် 4.2.2 official jellybean leaked firmware ထွက်ရှိလာပါပြီ.. Android Development